စာရေးသူ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အပြီး အမှတ်တရ
ဒါကတော့ စာရေးသူတို့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံရှိ ကေလနိယတက္ကသိုလ်မှ ကျင်းပသော (၅၇)ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းနား အမှတ်တရဓာတ်ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ဘွဲ့ယူကြသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် (၂၀၀၉) ခုနှစ်တွင် Ph.D. Mphil. M.A. B.A ဘွဲ့အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားပြုလုပ်ပုံကို စာရေးသူတွေ့ကြုံခံစားရသမျှ တင်ပြပေးရမည်ဆိုလျှင် ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနား မနက်တစ်ကြိမ်၊ နေ့ခင်းတစ်ကြိမ်ဖြင့် နှစ်ကြိမ်ခွဲပြီး ကျင်းပပါတယ်။ ဘွဲ့အောင်မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် တစ်ကြိမ်ကို (၅၀၀)ကျော် တက်ရောက်ကြသည်ကိုထောက်ဆလျှင် ဒီနှစ်ဘွဲ့ရရှိသူ (၁၀၀၀)ကျော်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စာရေးသူမြင်ဖူးခဲ့သော အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရရှိသူများကဲ့သို့ပင် ဒီနိုင်ငံက လူတွေကလည်း သူတို့ဘွဲ့ရသော သားသမီးဆွေမျိုးများနောက် လိုက်လာကြပေသည်။ စာရေးသူတို့သာ မိဘဆွေမျိုးမပါဘဲ မိမိတို့သူငယ်ချင်းအချင်းချင်းစုရုံးပြီး ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို ပျော်ရွှင်စွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြရလေသည်။
စာရေးသူတို့လည်း ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘွဲ့နှင်းသဘင်ကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် မြန်မာပြည်ရောက်လျှင် မိမိနီးစပ်ရာကို ပြသနိုင်အောင်၊ ဘလော့တင်ရအောင်ဆိုပြီး တက်နိုင်သမျှ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အပြင်ဘက်မှာတော့ မှတ်တမ်းများကို ရိုက်ကူးခဲ့ပေသည်။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အတွင်းမှာရိုက်သော ဓာတ်ပုံဗွီဒီယိုများ ကိုတော့ နောက်မှတက္ကသိုလ်က ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်မှပဲ တက်နိုင်သမျှ ဘလော့တွင် တင်ပေးပါမည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားတွင် ဘွဲ့ယူသူများ ဧည့်သည်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာများသည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသီချင်းနှင့်တက္ကသိုလ်သီချင်းများ သီဆိုကာ အခမ်းနားဖွင့်လှစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်က မိန့်ခွန်းအနည်းငယ်ပြောပြီးသကာလ ဘွဲ့ရသူများကို အစဉ်လိုက် ဘွဲ့ပေးပါသည်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ရာထူးကို ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ယူထားခြင်းကြောင့် ဘွဲ့ရရှိသူများသည် ဘွဲ့လက်မှတ်ယူခါနီးတွင် ကျောင်းအုပ်ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော်ကို ရှိခိုးကန်တော့ သည်ကို မြင်ရသောအခါ အံ့သြ၀မ်းသာဖြစ်ရသည့်အပြင် လေးစားစရာကောင်းသော အချက်တစ်ခုဟုပင် ထင်မှတ်မိပါသည်။
ထို့ပြင် ဒီနိုင်ငံရဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်း အတုယူစရာကောင်းတာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ အောင်လက်မှတ်မပေးခင် စာပလွေဗူးလေးထဲမှာ အောက်ပါစာကိုရေးပြီး ထည့်ပေးခြင်းပါ။ ရေးထားတဲ့စာရဲ့ လိုရင်းကတော့
By bearing awarded your degree today, which has armed you with academic knowledge and scientific thinking, you have proven to be competent to assume the responsibility of our couutry’s future.
It is our hope that you will utilize your educational qualifications and your experience for the development of our motherland. We wish you strength and courage in this endeavour.
Further, we believe that your professional contribution will enhance the prestige of the University of Kelaniya.
We would also like to use this opportunity to bestow our best wishes upon you on this momentous occasion.
ဒါကတော့ ဘွဲ့ယူသူများအား စာရေးသူဓာတ်ပုံထဲတွင် ကိုင်ဆောင်ထားသော စာပလွေထဲမှာ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ စာသားလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စာလေးထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဘွဲ့ရသူများရဲ့စိတ်ထဲမှာ နိုင်ငံအတွက် အနာဂတ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သန္ဒိဋ္ဌာန်လေးတော့ ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုလိုတက္ကသိုလ်က မိမိတို့အား တွန်းအားပေးတဲ့စကားလေးကို ပြောလိုက်ခြင်းကြောင့်ပါ။ ဘာမှမပြော မရေးဘဲနဲ့စာလျှင် ထိုသို့စာလေးထည့်ပေးခြင်းသည် ဘွဲ့ရရှိသူများအတွက် အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
ထို့ပြင် အားကျစရာကောင်းလှတဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ပြောသွားတဲ့စကားလေးကိုလည်း ဆက်စပ်နေလို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါဦးမယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျောင်းဆောင်သစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ပွဲမှာ သမ္မတဖြစ်သူ တက်ရောက်ပါတယ်။ အခမ်းနားမှာ သမ္မတက သူတို့နိုင်ငံဟာ ဘာသာရေးပညာနယ်ပယ် မှာ နိုင်ငံတကာမှလာရောက်၍ သင်ကြားနေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း။ နောင်အနာဂတ်မှာလည်း ဒီထက်မက ကမ္ဘာကိုဘာသာရေးပြန့်နှံ့အောင် ကြိုးစားပေးကြပါရန် ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအား လျှောက်ထားပါတယ်။ ထို့ပြင် သံဃာတော်များလိုအပ်သည်ကိုလည်း မိန့်ကြားပါ။ သံဃာတော်များ၏ လိုအပ်ချက်များ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ကား နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်၍ အစစအရာရာ ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတကလျှောက်ထားပါတယ်။
ထိုအခါ သံဃာတော်တစ်ပါးက ဦးဇင်းတို့သံဃာတွေမှာ ဘာသာရေးပညာ တက်မြောက်ပြီး နိုင်ငံတကာကိုပြန့်နှံ့အောင်၊ နိုင်ငံတကာမှ မိမိတို့နိုင်ငံသို့ လာရောက်သင်ယူနိုင်အောင် အားထုတ်နေပါတယ်။ သို့ရာတွင် မိမိတို့သံဃာများ၌ လူမှုရေးနှင့်ပတ်သတ်သည့်ပညာရပ်များ မသိရှိသဖြင့် ထိုပညာရပ်များပါသိရှိပါက ဒီထက်မက တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်၍ လူမှုရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပညာများရပ်ကိုပါ ထည့်သွင်းသင်ကြားခွင့်ရရန် မိန့်တော်မူရာ သမ္မတမှချက်ချင်းပင် သံဃာတော်များ လူမှုရေးပညာသင်ကြားရန် တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိုဖြစ်ရပ်လေးကိုကြည့်လျှင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံပြည်သူအစိုးရနှင့် သံဃာတော်များသည် သူတို့နိုင်ငံ၌ အဘက်ဘက်မှ ပညာရပ်များတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ဘာသာရေးပညာ ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး လျှင် နိုင်ငံတကာမှလည်း သူတို့နိုင်ငံသို့လာရောက်ကာ ဘာသာရေးပညာများ သင်ယူနိုင်အောင် ကြိုးစားနေကြသည်ကို တွေ့ရပေသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အလေ့အကျင့် လုပ်နည်းလုပ်ထုံးများကို တွေ့မြင်ရသောအခါ အမိနိုင်ငံကိုလည်း ဤနိုင်ငံကဲ့သို့ ပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုလျှင် မည်မျှလောက် ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ဤနိုင်ငံကလူများသည် ကိုးကွယ်သည့်က ကိုးကွယ်သည့်အခန်းကဏ္ဍ၊ ပညာရေးက ပညာရေးကဏ္ဍအဖြစ်ထားရှိကာ သူ့နေရာနှင့်သူ ပြုလုပ်ထားကြပါသည်။ ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ လူနှင့်ရဟန်းဟာ တန်းတူဖြစ်နေသော်လည်း သီလ၊ သမာဓိပိုင်းဆိုင်ရာမှာ လူထက်ရဟန်းသံဃာက ပိုသာလွန်ခြင်းကြောင့် ရိုသေလေးစားကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာလည်း ယုံကြည်မှုသဒ္ဓါတရားပြည့်ဝစွာဖြင့် ကိုးကွယ်ကြသည် ကို တွေ့ရပေသည်။
စာရေးသူတို့ အမိမြန်မာနိုင်ငံလူမျိုးများသည် ရဟန်းသံဃာများ လောကီပညာတက်မြောက်လျှင် လူထွက်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်နေကြပေသည်။ တကယ်တော့ လူထွက်ချင်တဲ့ရှင်ရဟန်းဟာ သူ့ဘာသာသူ ဘာမှမတက်လည်း ထွက်ချင်ထွက်မှာပါ။ ယခုခေတ် လူငယ်လေးများ၏ စိတ်သန္တာန်၌ ရဟန်းသံဃာများသည် သူတို့လောက် ပညာအရည်အချင်းမရှိ၊ အင်္ဂလိပ်စာမတက်၊ ကွန်ပျုတာမတက်စသည်ဖြင့် အထင်သေးကာ ရိုသေလေးစားစိတ်ပင် နည်းလာကြသည်ကို တွေ့ရပေသည်။ တကယ်လို့သာ ရဟန်းသံဃာနှင့်လူပညာရေးတွဲစပ်သင်ပေးမည်ဆိုလျှင် ပညာရေးနယ်ပယ်တူညီသည့်အတွက်ကြောင့် လူငယ်လေများသည် ရဟန်းသံဃာများနှင့်နီးစပ်မှုရှိခြင်းကြောင့် ဘာသာရေးအသိပညာ တိုးတက်မည်။ နောက်ပြီး ရဟန်းသံဃာများကိုလည်း သူတို့တက်ထားသည့်ပညာများ တက်သည့်အပြင် သီလ၊ သမာဓိလည်း သူတို့ထက်သာလွန်သည့်မို့ လူငယ်များ၏စိတ်သန္တာန်၌ ရဟန်းသံဃာများအား ပိုမိုလေးစားကိုးကွယ်မှုများ ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ထင်မြင်မိတွေးဆကြည့်ရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါပေသည်။